Remote login ပြုလုပ်ခြင်း – Linux VPS Myanmar
Linux VPS Myanmar
Easy Linux Tips To Learn Fast!
July 2, 2015 Htin Lin Kyaw
Remote login ပြုလုပ်ခြင်း
Remote login ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို အခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကနေ network ချိတ်ဆက်ပြီး login ဝင်ရောက် အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
server တွေမှာ keyboard, mouse, monitor တပ်ထားလေ့မရှိသလို GUI လဲ install ပြုလုပ် ထားလေ့မရှိပါဘူး။ အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေ remote login လုပ်ပြီး ဝင်ရောက်အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ Server Administrator တွေဟာ laptop လေးယူလာ၊ LAN ကြိုးလေးတပ်ပြီး remote login အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။
အခုလည်း VirtualBox ပေါ်က CentOS ကို server သဖွယ် အသုံးပြုဖို့ remote login အသုံးပြုကြ ရအောင်။
remote login ပြုလုပ်ဖို့ ip address သိဖို့ရယ်၊ network ချိတ်မိနေဖို့ရယ် လိုအပ်ပါတယ်။
(VirtualBox မှာ remote login အသုံးပြုဖို့ အပိုင်း ၃ မှာ ရေးခဲ့တဲ့အတိုင်း အရင်ပြုလုပ်ထားပြီး ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တကယ့် ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးနဲ့ အသုံးပြုရင်တော့ network ချိတ်မိပြီး ip address သိရင်ရပါပြီ။)
Network ချိတ်ဆက်မိတယ်ဆိုတာ ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာနဲ့ ဒီဘက်ကွန်ပျူတာ ကြိုးတပ်ထားရုံ နဲ့တော့မရပါဘူး။ Network card အလုပ်လုပ်ရမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ service တွေလဲ run နေမှ ရပါတယ်။ ip address ကို network range တူအောင်ပေးထားရမယ်။အလွယ်ပြောရရင်တော့ ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာနဲ့ ဒီဖက်ကွန်ပျူတာ ping ကြည့်လို့ reply ပြန်မှ network ချိတ်ဆက်မိတာပါ။
နောက် remote login အသုံးပြုဖို့ Secure SHell လို့ခေါ်တဲ့ SSH service ကလည်း run နေမှ ရမှာပါ။ Cent OS မှာ SSH service ဟာ built in ပါဝင်ပြီးသား၊ boot တတ်လာရင်ကို default အတိုင်း auto run ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
(မှတ်ချက်။ service တွေ run ပေးနေတဲ့ ကွန်ပျူတာဟာ server computer ဖြစ်ပါတယ်။ သေးတာကြီးတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူးဆိုတာ မှတ်ထားပါ။)
Remote login လုပ်ဖို့ SSH client ဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးတစ်ခုလိုပါတယ်။ CentOS တင်ထားတဲ့ VM က SSH server ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့က server ကို ချိတ်ဆက်မယ့် client software တစ်ခု အသုံးပြုရပါမယ်။
(မှတ်ချက်။ server ပါဝင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ network ကို server-based network ဒါမှမဟုတ် client–server network လို့ ခေါ်တယ်၊ server မပါရင် peer-to-peer network လို့ခေါ်တယ် ဆိုတာတွေတော့ သိတယ်မလား။ networking လေ့လာရင် ဒါတွေတော့ သိထားရမယ်နော်။ နောက် ip address တွေအကြောင်းလဲ အသေးစိတ် သိထားသင့်တယ်။ မသိသေးရင် သိအောင် လုပ်ပါ။)
အသုံးပြုရမယ့် software လေးကတော့ puTTY လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ link မှာ download ပြုလုပ်ပါ။ windows OS အတွက်နော်။ ကျွန်တော် ဒီ tutorial ကို windows Host OSပေါ်မှာ VBox တင်ပြီး CentOS ကို Guest OS အနေနဲ့ ရေးလို့ပါ။ တော်တော်များများကလည်း windows OS ပဲ သုံးတာလေ။ အကယ်၍ Linux distro တစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုရင်လဲ သိပ်မကွာ ပါဘူး။
ဥပမာ Ubuntu အသုံးပြုသူဆိုရင် VBox ရော၊ puTTY ရော နှစ်ခုလုံး software Center ကနေ အလွယ်တကူ install ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။puTTY ကို download လုပ်ပြီး install ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ပြီးရင် windows OS ရဲ့ cmd မှာ ipconfig လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ အဲ့မှာ Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network: ဆိုတဲ့ Virtual NIC တစ်ခုပါတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းကို VirtualBox ကို install ပြုလုပ်စဉ်က default အတိုင်း တပ်ဆင် install လုပ်သွားတာပါ။ ip address ကို auto ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အပိုင်း ၃ မှာ 192.168.0.100 ဆိုပြီး ပြင်ခဲ့ပါတယ်။ CentOS မှာလဲ 192.168.0.101 လို့ ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် network range တူပါတယ်။
windows OS ရဲ့ cmd မှာပဲ> ping 192.168.0.101လို့ ရိုက်ပြီး enter ခေါက်ပါ။ reply ပြန်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် Host OS နဲ့ Guest OS ဟာ network ချိတ်ဆက်မိတာ သေချာပါပြီ။ remote login ပြုလုပ်ဖို့ puTTY software ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။Host name (or ip address) ဆိုတဲ့ နေရာမှာ CentOS မှာ ပေးခဲ့တဲ့ ip address ဖြစ်တဲ့ 192.168.0.101 ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ ကျန်တာတွေ ဘာမှ မပြောင်းပါနဲ့။ Open နှိပ်လိုက်ရင် dialog box တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ok သာ နှိပ်လိုက်ပါ။
အမဲရောင် screen နဲ့ login as: ဆိုပြီး ပေါ်လာရင်တော့ remote login ပြုလုပ်ဖို့ ချိတ်ဆက်မိသွားပါပြီ။CentOS မှာ login ပြုလုပ်သလိုပဲ login လုပ်လို့ ရပါပြီ။CentOS မှာ အသုံးပြုတာနဲ့ အားလုံးအတူတူ အသုံးပြုရပါတယ်။ CLI နဲ့ပဲ အသုံးပြုရမှာ၊ CentOS မှာလဲ GUI မတင်ထားလို့ CLI နဲ့ သုံးရမှာဆိုတော့ အတူတူပါပဲ
နောက်ပိုင်း tutorial တွေမှာ puTTY နဲ့ပဲ အသုံးပြုတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Published by Htin Lin Kyaw
I amalinux enthusiast.	View all posts by Htin Lin Kyaw
Previous CentOS ကို VirtualBox တွင် တင်၍ Linux Server ကို လေ့လာခြင်း (အပိုင်း ၃)
Next CentOS ကို VirtualBox တွင် တင်၍ Linux Server ကို လေ့လာခြင်း (အပိုင်း ၅)